मतदाताका आँखामा पट्टी- विचार - कान्तिपुर समाचार
मतदाताका आँखामा पट्टी
आश्विन १, २०७४ अनुमा कोइराला
काठमाडौँ — हाम्रो देशमा थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन भइसके तर सामाजिक र आर्थिक परिवर्तन भने अपेक्षित दरमा हुन सकेको छैन । उल्टै मुलुक दलदलमा फस्दै गएको आभास हँ‘दै छ । हाम्रा अधिकांश कलकारखाना धराशायी छन् । बिलाउँदो निर्यात र फस्टाउँदो आयातले हाम्रो अर्थतन्त्र घाइते भएको छ ।
परनिर्भरता बढ्दै गएको छ। हाम्रा पूर्वाधार फितला छन्। गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा सम्पन्न वर्गको मात्र पहुँच छ। आपूर्तिमा असमानता छ। कैयौं नागरिकले खाद्यान्नलगायत न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताकै लागि संघर्ष गर्नु परिरहेको छ। पछिल्लो समय आएको पहिरो, बाढी र भूकम्पका कारण हजारौंको मृत्यु भयो, धेरै विस्थापित पनि भए। पीडितका लागि राहत वितरण, पुन:स्थापना तथा पुनर्निर्माण कार्य अपेक्षित रूपमा हुन सकेन। छिमेकी मुलुक भारतले लगाएको करिब पाँच महिना लामो नाकाबन्दीले आलो घाउमा नुन र खुर्सानी दलेजस्तै बनाइदियो। मुलुक र नागरिकको यो हविगत हुँदा समेत राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर देखिँदैन। त्यसैले यो देशको जिम्मेवार नागरिकका हैसियतले हामीले आफ्नो दृष्टिलाई बदल्न आवश्यक छ।
हामीकहाँ आँखा चिम्लिएर कुनै एक दललाई समर्थन गर्ने र भोट हाल्ने प्रवृत्ति छ। पार्टीको वाद, सिद्धान्त र दस्ताबेज एकातिर भए पनि गतिविधि अन्तैतिर मोडिएको देखिन्छ। तैपनि त्यस्ता दललाई समर्थन गर्न छाडेको पाइँदैन। जिम्मेवार नागरिकले पार्टीभन्दा माथि उठेर देशका लागि चिन्तन गर्न‘पर्ने होइन र? चुनावी घोषणापत्रमा लेखिएका कुरा कार्यान्वयन गराउन राजनीतिक दल र नेताहरू प्रतिबद्ध देखिँदैनन्। अधिकांश नेता आफूलाई विश्वास गरेर जिताउने मतदाताप्रति जवाफदेही नै बन्न सकेका छैनन्। उल्टो संवेदनहीन देखिन्छन्। पछिल्लो समय त सरकार सञ्चालकहरू शासक हैन, माफियाहरूको सेवकका रूपमा देखिन थालेका छन्। नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कलेज सम्बन्धन प्रकरण, कर फस्र्योट आयोग, साझा प्रकाशनका अनियमितता सार्वजनिक हुँदा पनि सरकार छानबिन र कारबाहीमा तत्पर देखिएन जसका कारण लुटतन्त्रलाई सरकारबाटै पोषण गरिरहे जस्तो देखिन्छ। भ्रष्टाचारका रूखमा पानी हाल्दै गर्दा नेताले आफूलाई नागरिकले ठूलो जिम्मेवारी सुम्पेर पठाएको बिर्सिएका छन्। नागरिकले पनि चुनाव आएपछि यस्ता विषयलाई बिर्सिदिन्छन्।
चुनावमा भोट हाल्ने बेला भन्ने गरिन्छ, ‘फलानो उम्मेदवार त हाम्रो दाइको ससुराली, उसैलाई दिनुपर्छ भोट। हाम्रो काम गराउन सजिलो हुन्छ।’ यस्ता मानसिकता भएका मतदाता तपार्इं हामीबीच धेरै भेटिन्छन्। उनीहरूले उम्मेदवारको पृष्ठभूमि, योग्यता/क्षमता र घोषणापत्रलाई नहेरी/नबुझी आँखा चिम्लेर भोट हाल्छन्। खास उनीहरूले आफ्ना खुट्टामा आफैं बन्चरो हानेका हुन्छन्, अनि पछि होसमा आएपछि थाहा पाउँछन्। यस्तै, ‘तिम्रो पार्टीलाई भोट हालेर के गर्न‘, जित्दैन, अनि मेरो भोट खेर जाँदैन त?’ भन्नेहरू पनि हुन्छन्। निर्वाचन परिणामपछि अबिर दलेर बाजामा नाच्न पाउनु नै हाम्रो भोटको सदुपयोग हो र? विजयी उम्मेदवारले चुनावका बेला गरिएका प्रतिबद्धता भुल्दै आफ्नो अधिकार चरम दुरुपयोग गरे भने हाम्रो भोट खेर गएजस्तै भएन र?
अब हामीले आँखामा बाँधेको पट्टी तुरुन्त खोल्ने साहस गर्नुपर्छ। मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सक्ने ‘भिजन’ र दृढ इच्छाशक्ति भएको नेता पहिचान गर्नुपर्छ र उनीहरूलाई नै चुनावमा जिताउनुपर्छ। अनि मात्र आफ्नै कालमा समृद्ध नेपाल देख्न सक्छौं।
प्रकाशित : आश्विन १९, २०७४ १६:०७
सडकहरुको अनियन्त्रित घुइँचो
आश्विन २, २०७४ डा. तारानाथ शर्मा
काठमाडौँ — अचेल नेपालभित्रका सडकहरूको घुइँचो र गाडीहरूको अनियन्त्रित हँकाइले पाँच–दस मिनेटमै पुगिने बाटो घन्टौं कुर्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा सर्वसाधारण जनताको कन्तबिजोकै भएको छ ।
विशेषगरी राजधानी काठमाडौंका मुख्य सडकहरू त सवारी नियन्त्रण नै नभएर छिचोल्नै नसकिने सिस्नै–सिस्नाले भरिएका डरलाग्दा जंगल भएका छन्। एकातिर सवारी चालकहरूले नियम नजानेर हो वा मान्दै नमानेर हो, जताततै भयावह दुर्घटनाको त्रास बढेको छ भने अर्कातिर हाम्रा सवारी नियन्त्रणमा खटिएका प्रहरी बन्धुहरू एकतमासले चौबाटामा हातका औंला हल्लाउँदै ठिंग उभिएका उभिएकै देखिन्छन्। चाहे सर्वसाधारण पैदल यात्री हुन्, चाहे सवारी चालक नागरिक हुन् अथवा चाहे सवारी नियन्त्रण गर्दै छु भनेर हातका औंला नचाउँदै उभिने प्रहरी भाइहरू हुन्, सबै नै डरलाग्दो दुर्घटनाका आकस्मिक घटनामा घेरिएका छन्। नियमहरू पालन नगरेपछि अथवा सवारी सम्बन्धी नियमहरूको फुट्टी ज्ञान नभएपछि समस्त जनताको यस्तै कन्तविजोक हुन्छ !
कन्तविजोकको ज्वलन्त उदाहरण गौशालाको चौबाटो हो। विमान बिसाउनीतिरबाट बग्रेल्ती बस, ट्रक, ट्याक्सी, निजी गाडीहरू, मोटरसाइकल, टेम्पो र साइकलहरूका साथै यात्री र सामान ओसारपसार गर्ने रिक्साहरू हुइँकिइरहेका हुन्छन्। अटेसमटेस गरेर, तँछाड–मछाड गरेर तथा नियमहरू उल्लंघन गर्दै अरुलाई छिर्नै नदिने गरेर कुदाइएका यी सवारी साधनले गर्दा हुने दुर्दान्त घुइँचो काठमाडौंली भाषामा ‘जाम’ शब्दले चिनाइन थालेको छ। वास्तवमा ‘जाम’ नेपाली होइन, अंग्रेजी शब्दको उच्चारण नजानेर जनसाधारणले प्रचलनमा ल्याएको ‘घुइँचो’ बुझाउने शब्द हो, जुन अंग्रेजीमा ‘ज्याम’ हो।
यस्तो ‘ज्याम’को प्रमुख उत्तरदायी सवारी नियन्त्रणमा खटिएका प्रहरीहरू नै हुन् भन्दा तपाईहरू छक्क पर्नुहोला, तर वास्तविकता त्यही नै हो। मेरा भाइहरू बानेश्वर, बत्तीसपुतलीतिर बस्छन्। उनीहरूलाई बेलुकातिर भेटेर जब म ज्योति विकास बैंक हुँदै सरस्वती नगरतिर फर्कनलाग्दा ट्याक्सी लिन खोज्छु, ‘कति दिनुहुन्छ?’ भन्दै ठाडै चार–पाँच सय रुपैयाँ भाडा माग्ने र ट्याक्सीमा देखिने मूल्यमा मान्दै–नमान्ने जस्ता तर्कहरू गरेर र खाली छँदा पनि ट्याक्सी खाली नै छैन भन्दै चालकहरू अर्कातिर लागेर म अभरमा पर्ने गरेको छु। किनभने ट्याक्सी होस्, बस होस्, टेम्पो होस् वा अरु नै सवारी हुन्, तिनलाई सवारी नियन्त्रण गर्न उभिएका गौशाला चौबाटाका प्रहरीहरूले बिना विच्चका घन्टौं रोकेर हुनसम्म सास्ती दिन्छन्। विमान बिसौनीतिरबाट आएको अविरल लर्कालाई दाहिने हातका चार औंलाले आऊ–आऊ, नरोक–नरोक, कुदाउ–कुदाउको इसारा गर्दै र अरुतिरका चालकहरूलाई छिर्नै नदिएर धुरुक्कै रुवाउँदै प्रहरी दंग पर्छ ! विमान बिसौनीबाट आउने बीस वा पच्चीस सवारीलाई जान दिएपछि अर्कापट्टिका सवारीहरूलाई त्यसरी नै गन्दै बीस वा पच्चीस गाडीहरूलाई गुड्न दिए त्यस्तो कन्तविजोक हुने नै थिएन, तर सवारी नियन्त्रक प्रहरी एकोहोरो अड्बांगो हात हल्लाएर एकातिरका लामहरूलाई मात्रै अनुमति दिइरहन्छन्, दिइरहन्छन् ! यस अनियमितता, अन्याय र एकोहोरो कृत्यका साथै सडकमा खण्ड छुट्याउन बनाइएका पहेँला धर्काहरूको सवारी चालकहरू पटक्कै पालना गर्दैनन्। आफ्नो खण्ड (अथवा अंग्रेजीमा ‘लेन’) मिच्नु हुँदैन, तर यहाँ त ‘खण्ड’को के कुरो अर्कापट्टिको अर्थात् उल्टापट्टिको बाटामा पनि गाडी छिराएर उधुम मच्चाइन्छ ! झन् साइकल र मोटरसाइल चालकहरू त अलिकति खाली ठाउँ देख्ने बित्तिकै आफ्नो खण्ड छाडेर त्यसमा सुटुसुटु छिर्छन्। उनीहरूमा कस्तो अनौठो र दर्दमनीय पक्का विश्वास छ भने साना–साना गाडीहरू (साइकल, मोटरसाइकल) जहिले पनि र जहाँ पनि छिराउन पाइन्छ ! उनीहरूलाई कुनै सवारी नियन्त्रणको नियम लागू नै हुँदैन। उनीहरू आफूलाई जहाँ हाँक्न पनि स्वतन्त्र छौं भनेजस्तो मनपरी घुमाउने, छिराउने र कुदाउने गर्नाले डरलाग्दो त्रास सडकमा नाचिरहेको हुन्छ।
वास्तवमा जुनसुकै खालको सवारीले पनि नियमको मर्यादापूर्ण रूपले पालन गर्नुपर्छ। ठूलठूला मिनिबस, ट्रक अथवा ट्याक्सी, टेम्पो र जस्तासुकै सवारी पनि आफ्नै खण्डमा सीमित रहेर (अर्थात् आफ्नै ‘लेन’ र ‘दिशा’को नियममा पूर्णरूपले रहेर) कुदाइनुपर्छ। झन् साइकल, मोटरसाइकल जस्ता ससाना सवारीले त सवारी नियमलाई पटक्कै नाघ्नु हुँदैन। भ्रमबाट सबै चालक जोगिनुपर्छ। दुर्घटना जस्तै सवारीले पनि सानो–ठूलो जस्ताले पनि निम्त्याउँछ र नियम भनेको सबैका लागि हो।
मैले यताउता यात्रा गर्दा देखेको अति दुर्दमनीय, त्रासपूर्ण र नियम उल्लंघनमा पूर्ण संलग्नचाहिंँ हाम्रा बसहरूमै देख्दै आएको छु। यात्री चढाउँदा सडक छेउको तोकिएको फराकिलो ठाउँमा रोकेर बाटामा हिँंड्ने, सवारीमा गुड्ने वा अरु कुनै प्रकारका व्यक्ति र सवारीलाई बाधा नपर्नेगरी बोलाउनु र बसभित्र छिराएर लानुपर्छ। उसरी नै कुनै बसयात्री ओर्लेर बाहिर जान चाहन्छ भने पनि उसलाई उसरी नै फराकिलो छेउमा कुनै अरु सवारी साधन वा पैदल यात्रीलाई बाधा नपर्नेगरी ओर्लन दिनुपर्छ। तर हाम्रा बस सञ्चालक भद्र पुरुषहरू व्यस्तस्थलमा ओराल्ने र चढाउने गर्छन् र नियमहरूको पूर्ण उल्लंघन गर्दै त्रास उत्पन्न गर्छन्।यस कुराको हेक्का होस् र निर्दाेष पैदल यात्री र सवारी चलाउनेहरूको कन्तविजोग हेर्नु नपरोस् !!
प्रकाशित : आश्विन १९, २०७४ १६:०१